Zvakadini kana foni asingadi kushanda MGTS? Kero uye nhamba dzenhare MGTS hwokugadzira rutsigiro
munhu anogona kashoma kuwana vanhu pakati yakatarwa vanoshandisa mutsetse usina kubata disruptions vari runhare. Zvikonzero panowanikwa ezvinhu akadaro kunogona kuva zvikuru zvizhinji: ". Dzakaparadzwa yedzimudzangara mitsetse" kubva banal "vainyeperwa runhare" kune mamwe yose
Kana foni asingashandi MGTS (Moscow City Telephone Network), unofanira kuziva pakutanga chii dambudziko iri uye apo riri: mukamuri (imba) kana mukati maro. Somuenzaniso, kana waya wakaremara ne mhuka mazino, regai kucherechedza kukuvadza hazvibviri. ruzivo True kuchabatsira kuti nokukurumidza kugadzirisa nyaya pamwe kuparadzirwa pakati kuonana centre mutsetse. Munyaya ino tichakurukura kukamura uchishandisa nyaya kuti vatengi vazhinji, "Foni haasi kushanda MGTS -? Apo kudana"
How kushuma matambudziko kubatana kusvika opareta?
Pane nzira dzakawanda kuonana mazano basa Provider uye vanotaura chinetso, asi kutanga unofanira kuitisa yakazvimirira kuongorora. Izvi achabvumira consultant kushuma nezvokuzadziswa rutsigiro mutsetse uye yekudyidzana racho rikurumidze chokururamisa nezvinetso. Kana zvikasashanda MGTS pafoni, asi zvinokwanisika kushevedzera imwe foni Somuenzaniso, kubva kubasa kana kubva mhuri uye shamwari, unofanira dhayira zvinotevera nhamba: 8 (495) 636-03-63.
Kubata nokudyidzana centre kubva serura
Kana pasina mukana kudare rimwe pafoni foni mukutsigira, unogona nguva dzose kushandisa kwako Mobile Gadget kutumira mashoko pamusoro Kuwanikwa controller matambudziko. By kuridza runhare 0636 kubva smartphone wako, unogona zvakare kutaura chikumbiro centre mushandi. Tapota ona kuti kutsigira chikwata anoshanda siku nesikati pasina zororo uye kwevhiki. Saka, unogona kutaura naye pamunongopinda kuti foni yako asingadi kushanda MGTS.
Pashure unobatanidza ane nyanzvi inofanira kuziviswa sezvo mashoko zvikuru kuzivisa user. The mushandi achava mazano uye edza kubatsira munhu ari kure, kana, Chokwadi, hatisi kutaura pamusoro zvokuimba kukuvara hutachiwana mitsetse. Kana uchida kuna tenzi, inodzidzisa anogona kushandisa kuti tenzi basa. Zvinokurudzirwa apo uchitsvaka kusiya neshamwari dzavo, izvo zvinogona dzitaure pamwe wacho kuti tsanangurai mamwe mashoko.
Ndiani anoita rokugadziridza?
Saka, kana muupenyu runhare kutaurirana chete mushandi rutsigiro mutsetse kugadzirisa dambudziko hazvibviri, zvakakodzera kukumbira dambudziko tenzi. Zvinofanira kucherechedzwa kuti mabasa aya akatakura Contractors (MGTS vadyidzani), izvo zvinoreva kuti mari mabasa uye pamwero yepamusoro zvingasiyana zvinooneka kwete chete munzvimbo dzakasiyana nzvimbo muguta, asi mukati ari dzimba shoma. Saka, kana mumwe waunoziva akakanganisa makambani, izvozvo hazvirevi kuti mushandi vachauya kwauri pamusoro chikumbiro, zvichava zvakaipa kuita basa ravo.
Pashure pokugamuchira kushanda yokugadzirisa boka vakabvumirana kushanya tenzi kusvika nemhosva. Paawa yakatarwa anosvika nyanzvi nzvimbo Company nechinangwa nechirwere, kubviswa yaivapo kukuvadzwa uye zvakawanda zvinhu. Chokutanga, anotanga kuongorora apo dambudziko anouya - mukamuri kana kunze. Kana nekusagona kushandisa kubatana chaiye muoti chokuita nemhosva zviito, akadai wakaputsika kana wakatsemuka parunhare wire, chiremba wacho achakwanisa kufamba pamusoro mutengo mabasa, uyewo kuchaitwa breakage achapiwa mari ne rinotengeswa nevaridzi. Sezvambotaurwa, zvose zvinoenderana kambani-Muvaki. Rates dzingasiyana zvichienderana ezvinhu. Kana dambudziko kutaurirana pamwe nemhosva iri kunze furati, mutengo waro rokubvisa achapiwa akatakurwa navanhu kambani unokupai sevhisi.
Inotaura MGTS mahofisi vanhu
Kana asiri kushanda pafoni runhare (MGTS), uye kuonana mutengi nerutsigiro zvinopera, unogona kuenda chero kuhofisi basa Provider. Zvechokwadi, mukusiyana rutsigiro mutsetse, iyo inoshanda 24/7, MGTS mahofisi vane imwe purogiramu. Kana hofisi maawa regai kukunakira, ipapo unofanira kuonana vatengi ane mubvunzo, nei asina kushanda MGTS runhare (apo kuzoshevedza vokukurukura vakapiwa ambotaurwa).
MuMoscow uye Moscow mudunhu zvose kushanda 24 mahofisi - neimwe revashandi izvi vachakwanisa mazano vatengi (zvose vanhu uye ezvokutengeserana vatengi) uye kuita chikumbiro kuzodana tenzi Repairman. Tapota cherechedza kuti unogona kusarudza hofisi MGTS pamusoro Website pasi "rokutengesa uye basa pakati." Nokuti mumwe dhipatimendi dzakanyorwa pano:
Nguva basa (kusanganisira basa purogiramu panguva mazororo);
hofisi pokuwanda kwebasa.
The rinotengeswa nevaridzi nyore kusarudza bazi umo munokwanisa kukumbira kushevedzera nyanzvi uye kuwana zano hwakanaka.
Kana kunyorera hofisi nechokwadi kuunza uchapupu nokuzivikanwa. Kana chibvumirano basa rakagadzirirwa kwete imi, pamwe pasipoti yako unofanira kuva rinotengeswa nevaridzi kuvapo.
Inotaura MGTS mahofisi kuti pamutemo masangano
Kana dambudziko kukurukurirana kwakaitika pakati yemakambani nemhosva, mubato inofanira kuva chero mahofisi shanu: Arbat, Vernadsky Prospekt, Proletarian, Zelenograd, Timiryazevskiy - vakashanda sevanhu, uye ezvokutengeserana vatengi. Kuona mashoko pamusoro mahofisi, pamusoro websites iri chete chikamu vanofanira tara akakwidza "Nokuti zvebhizimisi vatengi." Nokuti mahofisi, chete mashoko aripo - musi nenguva, iyo nzvimbo pamepu uye mahofisi kuzara.
Munyaya ino, isu akatarisa zvikuru nokukurumidza mubvunzo: "Ko kushanda MGTS pafoni, apo kuzovakwirira?" Nokuti MGTS vatengi pane dzakawanda marapirwo: runhare (uye kuti kuburikidza ane opareta kunogona foni uye pafoni mudziyo) uye hofisi netsvimbo.
MTS smartphone Smart Start: Features uye wongororo
"Megaphone" (Northwest): sei kudana opareta? How achishevedza opareta "MegaFon"
Sei kukanda mari kuti "Beeline" mu "MegaFon". Uchatamisa mari pakati dzaishandisa "Beeline" uye "megaphone"
Pafoni dzenhare uye GSM-kubatanidza
Unoziva sei mari "megaphone": dzinokosha unyanzvi
Nzira kuongorora motokari pamusoro MTS vakasara "Smart"
E-bhuku Digma S675: muchidimbu, nokurondedzerwa, mirayiridzo inofambiswa
Sei kurova motokari pari? Chikonzero uye kushanda
Sei zvose. Udza yefizikisi uye nyanzvi
Chii Carling bvudzi?
D-Link DIR 300: WiFi setup. Wi-Fi-router D-Link
Rating Antivirus nokuti "Android", rondedzero yakanakisisa
Cobalt bhomba sezvo chombo zvinoparadza.
Ndezvipi manholes vari?
Tatyana Ivanenko: pfupi Biography, Filmography uye upenyu pachako. Vladimir Vysotsky uye Tatyana Ivanenko
Chii hope chikepe: Dream Book
Nzira yekuderedza ping muWarface kuti uite sei kazhinji?
Pabhodhi nemakadhibhokisi: zvakanakira nekuipira. pagomo Michina